China Horizontal vortex spiral abavelisi oomatshini bokuhlamba kunye nababoneleli |INCHOI
I-Horizontal vortex spiral washing + vibrate susa ukuhlanjwa kwamanzi, ilungele ukuvaswa kwamagqabi, iingcambu kunye neziqhamo ezivundiweyo kunye nemifuno.Njengekhaphetshu yaseTshayina, iletisi, isipinatshi, kunye neradish evundiweyo, ikhaphetshu njalo njalo.
◆Ukuziphakamisa okuzenzekelayo +ixesha lokuqala ukuhlamba i-vortex spiral + ixesha lokuqala lokungcangcazela ukuze kususwe amanzi + okwesibini okuthe tyaba okuthe tye kwe-vortex spiral washing + okwesibini ukungcangcazela ukususa amanzi, i-vortex + yokuhlamba iqamza lomoya, esetyenziselwa ukuphelisa isiphithiphithi esenzeke ngokusebenzisa isiko lemveli. Oomatshini bokuhlamba i-vortex ukuhlamba imifuno engasikwanga .I-bubble yoxinzelelo oluphezulu lomoya lunokwahlula imifuno edibeneyo ebeka ukungabikho komatshini wokuhlamba we-vortex wendabuko unokuhlamba kuphela imifuno esikiweyo .Umbhobho wokukhupha uxhotyiswe ngevalve yokukhulula ukulungelelanisa amandla e-bubble xa ukucoca izixhobo ezahlukeneyo.
Uyilo lwe-cylinder olungathintekiyo lugwema umonakalo wokungqubana okuninzi ngexesha lokucoca izinto;inkqubo ye-ozone ye-disinfection isusa ngokufanelekileyo ubutyhefu bezinto eziseleyo ze-pesticide kwiziqhamo kunye nemifuno kunye neentsalela ze-detergent;uyilo lokuzaliswa kwamanzi oluzenzekelayo, akukho mfuneko yokuzaliswa kwamanzi ngesandla.
Ukuhlamba okokuqala okuthe tyaba okuthe tyaba okuthe tyaba kunye nokungcangcazela okokuqala ukususa ukuhlamba amanzi ukuze kupheliswe isiphithiphithi xa uhlamba imifuno ngaphandle kokusikwa ngokusebenzisa umatshini wokuhlamba we-vortex ojikelezayo.Iqamza loxinzelelo oluphezulu lunokwahlula imifuno edibeneyo ngokufanelekileyo ukulungisa ingxaki yokuba umatshini wokuhlamba we-vortex ococekileyo unokuhlamba kuphela izinto ezisikiweyo.
Qaphela: Inokwenziwa ngokwezifiso
Umatshini wokuhlamba ojikelezayo we-vortex ojikelezayo usetyenziselwa ukuhlamba imifuno enamagqabi, irhizome kunye neziqhamo ezithathiweyo & nemifuno enjengekhaphetshu yaseTshayina, iletisi, isipinatshi kunye neradish epikiweyo njl.njl.
1) Inkqubo yokuvala inzala ye-ozone inokususa intsalela yesitshabalalisi kunye netyhefu yeentsalela zokucoca.Ukuzinceda ngokuzalisa amanzi, ngaphandle komsebenzi wezandla.
2) Ukulawulwa kwenqanaba lamanzi, isixhobo sokubuyisela ukugxininiswa kokungcola
3) Ukulayisha ngokukhawuleza uhlobo lwe-roller isixhobo sokususa ukungcola kunye nesinambuzane: i-roller yahlula ukungcola kunye nesinambuzane ukusuka kumphezulu wamanzi uze uzikhuphe ngokusebenzisa i-port yokukhupha.
4) Inkqubo yokukhutshwa ngokuzenzekelayo: Ukuhluza okuqhubekayo okuzenzekelayo, Ukuqokelela ngokuzenzekelayo ukungcola, Qonda ukusetyenziswa kwamanzi kwakhona.
I-5) Izixhobo ze-bubble zoxinzelelo oluphezulu: inkqubo yokuhlamba i-bubble ifakwe emzimbeni womatshini wokuhlamba ngokusebenzisa isibiyeli sombhobho, ukuvelisa i-bubble emanzini, yongeza umxholo we-oksijini emanzini ukugcina ukutsha kwemifuno.
I-6) Isixhobo sokudonsa i-Vibration: hambisa ukukhanya kunye nezixhobo ezinzima ngokulungelelanisa ukujikeleza rhoqo.Usebenzisa ibhloko yokufunxa ingxolo ephantsi evela kumazwe angaphandle.
Umatshini wokucoca i-vortex osebenzayo wamkela ibhafu yamanzi e-bubble ukucoca, alungele ukucocwa kweziqhamo, imifuno (imifuno emitsha, imifuno ecoliweyo, imifuno yefungus), iimveliso zasemanzini, kunye nezixhobo zonyango.Isixhobo sinokwenziwa ngokwezifiso ngokobungakanani bemveliso.Isixhobo senziwe ngentsimbi ephezulu, ehambelana nemigangatho yokucoceka kokutya.Uxhotyiswe ngesixhobo sokuvelisa i-bubble, izinto eziphathekayo zikwimeko ejikelezayo, kwaye zinefuthe lokususa i-silt, uthuli kunye neentsalela ze-pesticide phezu komhlaba.Izixhobo zonke zenziwe ngentsimbi ecocekileyo kwaye zisetyenziselwa ukucoca ukutya.
Iingenelo zokucoca iqamza + umatshini wokuhlamba imifuno ojikelezayo.Ngesiseko sokucoca i-cyclone yendabuko, idizayini yokucoca i-bubble yongezwa, kwaye umbhobho we-injection yegesi ephezulu ihlelwe phantsi kwe-cylinder ukuphelisa i-clumping phenomenon eyenziwa ngumatshini wokuhlamba imifuno ye-cyclone xa ucoca imifuno enganqunywanga.Iibhubhu zomoya ezinoxinzelelo oluphezulu zinokuhlukaniswa zibe Iqela lemifuno lixazulula iintsilelo zohlobo olucocekileyo olujikelezayo, kwaye umatshini wokuhlamba imifuno unokucoca kuphela izinto emva kokusika.Umbhobho wokukhupha uxhotywe nge-valve yokunciphisa uxinzelelo ukulungelelanisa amandla e-bubble xa ucoca izinto ezahlukeneyo.Ukucoca i-Flip + 16 yokucoca i-bubble vibration yoxinzelelo oluphezulu, ukucocwa okuphindwe kabini, nokuba imifuno epheleleyo okanye imifuno enqunywe, imifuno ekhuniweyo, umatshini wokuhlamba imifuno we-eddy yangoku unokusingatha ngokulula.
1. Umzimba we-cylinder wenziwe nge-SUS304 ipleyiti yensimbi engenasici, uhlalutyo olungenasiphelo se-3-dimensional, ukujikeleza + ukucocwa kwe-bubble kabini, kunye ne-ozone inokongezwa kwi-disinfecting system yepompo.
2. Ukungena kwamanzi kunye necala letanki lamanzi lixhotyiswe ngeepayipi zokutshiza amanzi, ezibonelelwa ngempompo yamanzi yoxinzelelo oluphezulu.Amanzi kwitanki yamanzi enza imeko ejikelezayo ngombhobho wokutshiza wamanzi phantsi kwesenzo sombhobho wokutshiza wamanzi.
3. Izinto eziphathekayo zijikeleza phambili phantsi kwesenzo sokuhamba kwamanzi, kunye nemveliso: i-36O degree swirling washing.
4. Ukuthuthwa kwezinto eziphathekayo kukuhamba kwe-high-frequency vibration drainage, usebenzisa i-high-frequency micro-vibration motors kunye nemithombo ye-high-frequency flexible.
5. Kukho itanki yamanzi ejikelezayo ekupheleni kwesikrini sokungcangcazela, kunye nesixhobo sokucoca kwindawo ephezulu yetanki yamanzi ejikelezayo, enokucoca ngokufanelekileyo ukungcola.
6. Itanki yamanzi ejikelezayo ixhotyiswe ngesixhobo sokuzalisa amanzi ngokuzenzekelayo.Xa umgangatho wamanzi ufikelela kwinqanaba eliphantsi elichazwe kwangaphambili, amanzi abanjwe ngokuzenzekelayo ngaphandle kokukhutshwa kwamanzi ngesandla.
Ubungakanani 4200×800mm (Ububanzi)
Amandla onke 9.67kw
Ukusetyenziswa kwamanzi 0.4MT / h
Izinto eziphathekayo I-2.5mm ibakala lokutya le-304 yensimbi engenasici
Impompo yamanzi ye-centrifugal yensimbi engenasici Iiseti ezi-2 3kw/iseti
Impompo yeVortex 2.2kw
Injini yokungcangcazela 2iseti 0.16kw/iseti
Injini yokukhupha i-slag 0.37kw
Indlela yemoto 0.18kw
Ijeneretha yeOzone 0.6kw
Itanki encinci yamanzi 2mm ukutya grade 304 steel stainless
Ipleyiti ye-vibration ye-sieve Ubukhulu: 2mm Umngxuma Ubungakanani: 3mm Izinto: ibakala lokutya 304 intsimbi engatyiwayo
Ibhloko yesithinteli sokungcangcazela Ithathwe eSwitzerland
Isibiyeli 50×50×2mm ukutya grade 304 steel stainless
Ngaphambili: I-DLZ-420/520 ikhompyutha ezenzekelayo eqhubekayo yolula umatshini wokupakisha i-thermoforming vacuum
Okulandelayo: Itonela IQF yesikhenkcisi esiKhawulezayo
Umatshini wokuhlamba ibhaskithi
Umatshini wokuhlamba iibhotile
Umatshini wokuhlamba amaqamza
Umatshini wokuhlamba ipalethi